Fampiasana smartphone: Aiza no ampiasain'ny olona finday avo lenta finday avo lenta?
Zoma, Oktobra 7, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
Tatango, orinasa Marketing amin'ny SMS, dia nivoaka niaraka tamin'ny sary hafa iray izay tsotra nefa manelingelina amin'ny fomba nanenenan'ireo finday avo lenta ny fiainantsika sy ny asanay. Enga anie ny teatira sarimihetsika hametraka fitaovana fanakanana signal izay hahatonga ny telefaona finday tsy hisy ilana azy ao amin'ny teatira sarimihetsika. Avelao ao anaty fiara izy rey ​​olona a! Tena matotra!
Inona ny hevitrao? Manamora ny fiainantsika ve ny smartphone? Sa manelingelina antsika amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny izy ireo?
8 Oktobra 2011 à 7:30
Isan-jato avy amin'ny inona? Tsy nahazo ny antontan'isa
8 Okt 2011 amin'ny 3:00 PM
Fanadihadiana natao tamin'ireo mpampiasa Smartphone izay nataon'ny orinasa Prosper tamin'ny Septambra 2011.